ဖုန်စုပ်စက်၊ ပန်းဖုန်စုပ်စက်၊ အစားအစာများဖုန်စုပ်စက် - ALLCOLD
ALLCOLD သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး R&D ကိုရည်စူးပြီးတရုတ်နိုင်ငံ Dongguan တွင် ၁၀၀၀၀ m2 စက်ရုံရှိသည်
လျင်မြန်သောအအေးနှုန်း၊ ၁၀၀ 10 မှ ၁၀ than အောက်အောက်သို့မိနစ် ၃၀ ခန့်သာကြာသည်။ အစားအစာ၏ဗဟိုနှင့်မျက်နှာပြင်တွင်တူညီသောအအေးအပူချိန်။ အပြည့်အဝအထီးကျန်သောသံမဏိအခန်းထဲရှိအအေးအတွက်“ ဒုတိယညစ်ညမ်းမှု” ထုတ်ကုန်များ၏အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္andာန်နှင့်သီးနှံအမျိုးအစားကိုအထူးလိုအပ်ချက်မရှိပါ။ ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောအပူချိန် ၂၅ မှ ၅၀ ℃အထိလျင်မြန်စွာဖြတ်ကျော်ပါ။ AllCOLD လေဟာနယ်အအေးများကိုယခုအခါအအေးခံကိရိယာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
Vacuum Cooler Models & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ: Vacuum Cooler အဓိက Feature ၁။ မြန်မြန်မြန်သောအရှိန်။ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများသည် ၁၀ မှအအေးခံနိုင်သည်။ ၂၀-၃၀ သာလိုအပ်သည်၊ မီးဖုတ်ထားသောအစားအစာများသည် ၂၀ မှ ၂၀ အတွင်းအအေးခံနိုင်သည်။ 2. ယူနစ်ယူနီဖောင်း။ လေဟာနယ်အခြေအနေအောက်မှာအစားအစာ core ကိုကနေမျက်နှာပြင်မှအအေး။ စားနပ်ရိက္ခာရေဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်အဆင့်နှစ်ဆင့်အေးစေသော။ မြင့်မားသောအပူချိန်မှ ၆၀ to သို့ရောက်သောအခါဘက်တီးရီးယားများမြန်ဆန်သောကြီးထွားမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အစာသည်လျင်မြန်စွာအအေးခံလိမ့်မည်။ ဒုတိယသိုလှောင်မှုသည်အငွေ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အစာအရသာတိုးတက်စေရန်နှေးကွေးစေသည်။ 4.M ...
ALLCOLD Vacuum Cooling အားသာချက်များ? 20 မိနစ် / သံသရာပတ်ပတ်လည် 1.Ultra-Fast အအေးနည်းလမ်း။ ၂-၃ သက်တမ်းကြာရှည်သောသက်တမ်း။ ၃၀% ကျော်သောစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ ထုတ်လုပ်မှု၏အပျက်အယွင်းအနည်းဆုံး ၄ ။ Vacuum Cooling ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲ။ ရိတ်သိမ်းပြီးသည်နှင့်လတ်ဆတ်သောအရာအားလုံးသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့ရောက်သွားသည်။ ဤစိတ်ဖိစီးမှုသည်အသက်ရှူခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအဓိကအားဖြင့်အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအသက်ရှူခြင်းနှင့် transpiration နှစ်မျိုးလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေဟာနယ်အအေးခံစက်များဖြင့် ၇၅% နှင့်ထို့ထက်များစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အို ...
ဖုန်စုပ်စက်၏အားသာချက် (၁) အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ (၂) အအေးချိန်တိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅ မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်။ အစာရှောင်ခြင်းသန့်ရှင်းပြီးညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။ (3) Botrytis နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုဟန့်တားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် Turfs များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအနည်းငယ်သောပျက်စီးမှုသည် 'အနာပျောက်' နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆက်လက်မတိုးချဲ့နိုင်ပါ။ (၄) ဖယ်ရှားလိုက်သောအစိုဓာတ်သည်အလေးချိန်၏ ၂% မှ ၃% အထိသာရှိသည်။ ဒေသတွင်းခြောက်သွေ့မှုနှင့်ပုံပျက်သောပုံသဏ္accountsာန်မရှိပေ။ (၅) မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသော်လည်းမိုးပေါ်၌စပါးရိတ်သိမ်းလျှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအစိုဓာတ်ကိုလေအောက်၌ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
ဖုန်စုပ်စက်၏အင်္ဂါရပ် (၁) မှိုများ၏အကောင်းဆုံးအာရုံခံမှုနှင့်အရည်အသွေး (အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာနှင့်အာဟာရများကို) သိမ်းထားပါ။ (၂) အအေးချိန်တိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅ မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်။ အစာရှောင်ခြင်းသန့်ရှင်းပြီးညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။ (၃) Botrytis နှင့်အင်းဆက်ပိုးများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ (၄) ဖယ်ရှားလိုက်သောအစိုဓာတ်သည်အလေးချိန်၏ ၂% မှ ၃% အထိသာရှိသည်။ ဒေသခံခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းမရှိခြင်း (၅) အဓိကနှင့်မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်တူညီသည်။ (၆) ကြိုတင်အအေးခံခြင်းကြောင့်မှိုသည်သိုလှောင်ထားနိုင်စွမ်းပိုရှည်နိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လေဟာနယ် c ကိုသုံးတာလဲ ...
ဖုန်စုပ်စက်၏အားသာချက် (၁) အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသိမ်းထားပါ။ (၂) အအေးချိန်တိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅ မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်။ အစာရှောင်ခြင်းသန့်ရှင်းပြီးညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။ (၃) Botrytis နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုဟန့်တားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဆေးပင်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိထိခိုက်ပျက်စီးမှုများသည် 'ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်' သို့မဟုတ်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ (၄) ဖယ်ရှားလိုက်သောအစိုဓာတ်သည်အလေးချိန်၏ ၂% မှ ၃% အထိသာရှိသည်။ ဒေသတွင်းခြောက်သွေ့မှုနှင့်ပုံပျက်သောပုံသဏ္accountsာန်မရှိပေ။ (၅) မိုးရွာသောအခါဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရိတ်သိမ်းလျှင်ပင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအစိုဓာတ်ကိုလေဟာနယ်အောက်တွင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ (၆) ဒူး ...